ယမကာဝိုင်းတို့အတွက် သိတတ်ရမည့် အချက်များ – Gentleman Magazine
ယမကာဝိုင်းတို့အတွက် သိတတ်ရမည့် အချက်များ
ပျော်ပျော်နေရမယ့် ပါတီမျိုးမှာ စည်းကမ်းချက်တွေ မထားချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူမှုရေးကတော့ သိတတ်ရမှာပါ။ ပါတီတွေမှာ သိတတ်ရမယ့် အချက်လေးတွေကို အောက်မှာ ရှုစားကြည့်ပါဦး။
၁. ပါတီကို လက်ဗလာနဲ့ လာခြင်း
ပါတီကို လက်ဗလာနဲ့လာတယ်။ ဝိုင်တွေ အကုန်သောက်တယ်။ မုန့်တွေ တစ်ပြုံကြီးစားတယ်။ ပြီးတော့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြန်သွားတယ်။ အဲလိုကောင်မျိုးကို လူတိုင်းချဉ်မှာပါ။ ပါတီလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း ရိုင်းတယ် ထင်သွားမှာပါ။ ဝိုင်တစ်ပုလင်းလောက်တော့ အိတ်ထဲ ထည့်ယူသွားလိုက်ပါ။
၂. ကော့တေး အဆင်တန်ဆာများ
ကော့တေးခွက်မှာ အလှအပ ထီးလေးတွေ တပ်ဖို့က သူ့နေရာနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ ဒီဇိုင်း တော်တော်များများက ဒိတ်အောက်နေပါပြီ။ အဲဒါတွေက ရှုပ်လဲ ရှုပ်ပါတယ်။ ဟာဝိုင်အီကမ်းခြေမှာ Tequila Sunrise သောက်ဖို့ မဟုတ်ရင်တော့ အဲဒိထီးလေးတွေ တပ်ပေးမနေပါနဲ့တော့။
၃. ကိုယ့်ခွက် ကိုယ်ငှဲ့ခြင်း
ဂျပန်မှာဆို ကိုယ့်ခွက်ထဲ ကိုယ့်ဘာသာ အရက်ငှဲ့တာ အရမ်းရိုင်းပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ပထမဆုံး အိမ်ရှင်က တခြားသူတွေကို ငှဲ့ပေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ အိမ်ရှင်ကို ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ပြန်ငှဲ့ပေးရပါတယ်။ လုပ်ငန်းပါတီတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ လူတိုင်းခွက်ကိုင်ပြီး ချီးယားစ် မလုပ်မချင်း မသောက်သင့်ပါဘူး။ အိမ်ရှင်ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ ဧည့်သည်တွေကို ကုန်တိုင်းငှဲ့ပေးနေမှာပါ။
၄. အရက်ကို အားဖြည့်အချိုရည်တွေနဲ့ရောခြင်း
တော်တော်များများကတော့ စမ်းဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်နဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေနဲ့ ရောသောက်လို့ မကောင်းပါဘူး။ လုံးဝ မသောက်သင့်ဘူးလို့တော့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗော့ဒ်ကာနဲ့ Red Bull ၊ ဂျင်နဲ့ Tonic အတွဲတွေဟာ ခဏလေးနဲ့ ခေါင်းကိုက်စေတတ်ပါတယ်။ အသိစိတ်ပျောက်သွားစေပါတယ်။ အရေးကြီးပါတီတွေမှာ မသောက်သင့်ပါဘူး။
၅. ရေခဲ နောက်ဆုံးမှ ထည့်ခြင်း
စပ်ပြီးသား ယမကာခွက်ထဲကို ရေခဲထည့်တာ၊ ဝိုင်ခွက်ထဲကို ရေခဲထည့်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အရသာကောင်းကောင်းရအောင်ဆိုရင် ရေခဲကို အမြဲ အရင်ထည့်ပါ။ ဝိုင်ဆိုရင်တော့ ဝိုင် အရည်အသွေးနဲ့ ဖော်စပ်ပုံအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ပုံမှန် ရိုးရိုးဝိုင် ဆိုရင်တော့ ရေခဲ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ ဈေးကြီးတဲ့ ဝိုင်ဆိုရင်တော့ ရေခဲလုံးဝမထည့်ပါနဲ့။ ဝိုင်ထဲကို ရေခဲထည့်လိုက်တာဟာ တောကျရာရောက်တဲ့အပြင် ဝိုင်ရဲ့ အရသာကိုလည်း ပျက်စေနိုင်ပါတယ်။
၆. အရက်စပ်သမားကို လက်ပြခြင်း
သူ အာရုံစိုက်တာကိုတော့ ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရက်ဆာနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲကနေ သူတို့ကို လက်ပြမိရင်တော့ ပိုကြီးကြာကြာ စောင့်ရမှာပါ။ ပိုက်ဆံ လှမ်းပေးတာ၊ လက်ဖျစ်တီးတာကလည်း တူတူပါပဲ။ အဲလိုမဖြစ်အောင် ဘားမှာ စည်းကမ်းတကျ တန်းစီပေးပါ။ အားလုံးသောက်ချင်နေကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အလှည့်ကျော်တာ၊ အတင်းတိုးတာတွေဟာ အရမ်းရိုင်းပါတယ်။
၇. ဘီယာကို တည့်တည့်ငှဲ့ခြင်း
သူငယ်ချင်းတွေကို ဘီယာငှဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ မကြာခဏ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အမြှုပ်တစ်ဝက်လောက်ထနေတဲ့ ဘီယာခွက်ကြီးကို မလိုချင်ကြပါဘူး။ ခွက်ကို တစ်ဝက်လောက် စောင်းပြီး ငှဲ့ပေးပါ။
အားလုံး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အကုန်လုံးပျော်နေကြတဲ့ သာယာတဲ့ ညချမ်းလေးမှာ တစ်ယောက်ယောက်က လွန်သွားတယ်။ စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်။ အရမ်းရစ်တယ်။ အကောင်းဆုံးပါတီပဲ! ငါမမူးသေးပါဘူးကွ! ဆိုတာတွေ ကြုံးဝါးတယ်။ အဲဒိလူဘေးက ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ကတော့ သူ့ကို တွဲပေးထားရတယ်။ သောက်ချင်သေးတယ် ရစ်လို့ ရေကို ဗော့ဒ်ကာလို့ ပြောပြီးတိုက်ရတယ်။ Taxi ငှါးတော့ အကုန် လက်ခါပြပြီး မောင်းပြေးကြတယ်။ ကံဆိုးပြီး ရပ်ပေးမိတဲ့ Taxi သမားကတော့ သူ့နောက်ခုံ လျှော်ပြီးခါစလေး အန်ဖတ်စာမိမှာစိုးလို့ ဘုရားတပြီး မောင်းသွားတယ်။
အကြံတစ်ခုပေးပါမယ်။ အဲလိုကောင်မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ယမကာဝိုငျးတို့အတှကျ သိတတျရမညျ့ အခကျြမြား
ပြျောပြျောနရေမယျ့ ပါတီမြိုးမှာ စညျးကမျးခကျြတှေ မထားခငျြပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူမှုရေးကတော့ သိတတျရမှာပါ။ ပါတီတှမှော သိတတျရမယျ့ အခကျြလေးတှကေို အောကျမှာ ရှုစားကွညျ့ပါဦး။
၁. ပါတီကို လကျဗလာနဲ့ လာခွငျး
ပါတီကို လကျဗလာနဲ့လာတယျ။ ဝိုငျတှေ အကုနျသောကျတယျ။ မုနျ့တှေ တဈပွုံကွီးစားတယျ။ ပွီးတော့ ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ ပွနျသှားတယျ။ အဲလိုကောငျမြိုးကို လူတိုငျးခဉျြမှာပါ။ ပါတီလုပျတဲ့သူတှကေလညျး ရိုငျးတယျ ထငျသှားမှာပါ။ ဝိုငျတဈပုလငျးလောကျတော့ အိတျထဲ ထညျ့ယူသှားလိုကျပါ။
၂. ကော့တေး အဆငျတနျဆာမြား
ကော့တေးခှကျမှာ အလှအပ ထီးလေးတှေ တပျဖို့က သူ့နရောနဲ့သူ ရှိပါတယျ။ ဒီဇိုငျး တျောတျောမြားမြားက ဒိတျအောကျနပေါပွီ။ အဲဒါတှကေ ရှုပျလဲ ရှုပျပါတယျ။ ဟာဝိုငျအီကမျးခွမှော Tequila Sunrise သောကျဖို့ မဟုတျရငျတော့ အဲဒိထီးလေးတှေ တပျပေးမနပေါနဲ့တော့။
၃. ကိုယျ့ခှကျ ကိုယျငှဲ့ခွငျး
ဂပြနျမှာဆို ကိုယျ့ခှကျထဲ ကိုယျ့ဘာသာ အရကျငှဲ့တာ အရမျးရိုငျးပါတယျ။ ပုံမှနျဆို ပထမဆုံး အိမျရှငျက တခွားသူတှကေို ငှဲ့ပေးရပါမယျ။ ပွီးတော့ အိမျရှငျကို ဧညျ့သညျတဈယောကျက ပွနျငှဲ့ပေးရပါတယျ။ လုပျငနျးပါတီတဈခုမှာဆိုရငျတော့ လူတိုငျးခှကျကိုငျပွီး ခြီးယားဈ မလုပျမခငျြး မသောကျသငျ့ပါဘူး။ အိမျရှငျကောငျးတဈယောကျဟာ ဧညျ့သညျတှကေို ကုနျတိုငျးငှဲ့ပေးနမှောပါ။
၄. အရကျကို အားဖွညျ့အခြိုရညျတှနေဲ့ရောခွငျး
တျောတျောမြားမြားကတော့ စမျးဘူးကွပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အရကျနဲ့ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှနေဲ့ ရောသောကျလို့ မကောငျးပါဘူး။ လုံးဝ မသောကျသငျ့ဘူးလို့တော့ မပွောပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဗော့ဒျကာနဲ့ Red Bull ၊ ဂငျြနဲ့ Tonic အတှဲတှဟော ခဏလေးနဲ့ ခေါငျးကိုကျစတေတျပါတယျ။ အသိစိတျပြောကျသှားစပေါတယျ။ အရေးကွီးပါတီတှမှော မသောကျသငျ့ပါဘူး။
၅. ရခေဲ နောကျဆုံးမှ ထညျ့ခွငျး
စပျပွီးသား ယမကာခှကျထဲကို ရခေဲထညျ့တာ၊ ဝိုငျခှကျထဲကို ရခေဲထညျ့တာ မလုပျသငျ့ပါဘူး။ အရသာကောငျးကောငျးရအောငျဆိုရငျ ရခေဲကို အမွဲ အရငျထညျ့ပါ။ ဝိုငျဆိုရငျတော့ ဝိုငျ အရညျအသှေးနဲ့ ဖျောစပျပုံအပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ပုံမှနျ ရိုးရိုးဝိုငျ ဆိုရငျတော့ ရခေဲ ကွိုကျသလောကျထညျ့ပါ။ စြေးကွီးတဲ့ ဝိုငျဆိုရငျတော့ ရခေဲလုံးဝမထညျ့ပါနဲ့။ ဝိုငျထဲကို ရခေဲထညျ့လိုကျတာဟာ တောကရြာရောကျတဲ့အပွငျ ဝိုငျရဲ့ အရသာကိုလညျး ပကျြစနေိုငျပါတယျ။
၆. အရကျစပျသမားကို လကျပွခွငျး
သူ အာရုံစိုကျတာကိုတော့ ရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အရကျဆာနတေဲ့ လူအုပျကွီးထဲကနေ သူတို့ကို လကျပွမိရငျတော့ ပိုကွီးကွာကွာ စောငျ့ရမှာပါ။ ပိုကျဆံ လှမျးပေးတာ၊ လကျဖဈြတီးတာကလညျး တူတူပါပဲ။ အဲလိုမဖွဈအောငျ ဘားမှာ စညျးကမျးတကြ တနျးစီပေးပါ။ အားလုံးသောကျခငျြနကွေတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ အလှညျ့ကြျောတာ၊ အတငျးတိုးတာတှဟော အရမျးရိုငျးပါတယျ။
၇. ဘီယာကို တညျ့တညျ့ငှဲ့ခွငျး
သူငယျခငျြးတှကေို ဘီယာငှဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ မကွာခဏ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဘယျသူမှ အမွှုပျတဈဝကျလောကျထနတေဲ့ ဘီယာခှကျကွီးကို မလိုခငျြကွပါဘူး။ ခှကျကို တဈဝကျလောကျ စောငျးပွီး ငှဲ့ပေးပါ။
အားလုံး ကွုံဖူးကွမှာပါ။ အကုနျလုံးပြျောနကွေတဲ့ သာယာတဲ့ ညခမျြးလေးမှာ တဈယောကျယောကျက လှနျသှားတယျ။ စကားတှေ အမြားကွီးပွောတယျ။ အရမျးရဈတယျ။ အကောငျးဆုံးပါတီပဲ! ငါမမူးသေးပါဘူးကှ! ဆိုတာတှေ ကွုံးဝါးတယျ။ အဲဒိလူဘေးက ကံဆိုးသူမောငျရှငျကတော့ သူ့ကို တှဲပေးထားရတယျ။ သောကျခငျြသေးတယျ ရဈလို့ ရကေို ဗော့ဒျကာလို့ ပွောပွီးတိုကျရတယျ။ Taxi ငှါးတော့ အကုနျ လကျခါပွပွီး မောငျးပွေးကွတယျ။ ကံဆိုးပွီး ရပျပေးမိတဲ့ Taxi သမားကတော့ သူ့နောကျခုံ လြှျောပွီးခါစလေး အနျဖတျစာမိမှာစိုးလို့ ဘုရားတပွီး မောငျးသှားတယျ။
အကွံတဈခုပေးပါမယျ။ အဲလိုကောငျမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။
Previous: မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းလေ့လာနိုင်တဲ့ ဘဝအကျိုးပြု အချက်လေးများ
Next: ချစ်ဇာတ်လမ်းအယောင်ဆောင်လက္ခဏာ ၈ မျိုး